Found 159 ~ Mateu, Mako, Ruka, John, Mabasa, VaRoma, 1 VaKorinte, 2 VaKorinte, VaGaratiya, Efesolaisille, VaFiripi, VaKorose, 1 VaTesaronika, 2 VaTesaronika, 1 Timoti, 2 Timoti, Tito, Firimoni, VaHebheru, James, 1 Petro, 2 Petro, 1 Johani, 2 Johani, 3 Johani, Judha, Zvakazarurwa
Satani akati kwaari, “Zvose izvi ndinokupa kana ukati pasi gwadagwa uchindinamata.”
naizvozvo, namatai kuna Tenzi wezvinoda kukohwiwa kuti atumire vakohwi mumunda wake unoda kukohwiwa.”
asi haana mudzi maari anotirira kwechinguva. Kana nhamo namatambudziko zvamuka pamusana peshoko, anobva atsauka.
Paakapedza kuonekana negungano riya ravanhu akakwira mugomo ari oga kundonamata. Paakanga ava madeko, akanga arimo ari oga.
Kundinamata kwavo ndekwenhando vachidzidzisa, sechokwadi, mitemo yavanhu.’ ”
Namatai kuti kutiza kwenyu kusave panguva yechando kana kuti pazuva reSabata.
Jesu akaenda navo kune imwe nzvimbo inonzi Getsemani, akati kuvadzidzi vake, “Garai pano ini ndimboenda uko ndimbondonamata.”
Jesu akaenda mberi zvishoma ndokubva awira pasi nouso akanamata achiti, “Baba vangu, kana zvichigoneka, mukombe uyu wamatambudziko ngaundipfuure asi kurege kuva kuda kwangu asi kuda kwenyu.”
Jesu asudurukazve akanamata achiti, “Baba vangu, kana mukombe uyu usingakwanisi kundipesa ndichifanira kuunwa, kuda kwenyu ngakuitwe.”
Jesu akavasiyazve, akaenda akandonamata rwechitatu achitaura mazwi mamwechetewo.
Mangwanani — ngwanani, kuchiri kutema, Jesu akamuka akabuda achienda kunzvimbo isina vanhu kwaakandonamata ikoko.
Kuzoti apedza kuonekana navo, akakwira mugomo kundonamata.
Kundinamata kwavo ndokwonhando nokuti vanodzidzisa sechokwadi chaicho, zvinhu zvakatemwa zvavo navanhu.’
Akavapindura achiti, “Rudzi rwemweya uyu haruna madzingiro, asi nokunamata chete.”
Nguva dzose pamunomira muchinamata, kana pano mumwe wamuine chigumbu naye, muregererei, kuti Baba venyu vari kudenga vakuregerereiwo zvikanganiso zvenyu.’ ”
Namatai kuti zvisaitike panguva yechando.
Vakaenda panzvimbo inonzi Getsemani. Jesu akati kuvadzidzi vake, “Garai pano, ini ndimbonamata.”
Akaenda mberi zvishoma ndokubva awira pasi akanamata kuti kana zvichigoneka zvaizoitika nguva iyi zvimupfuure zvake.
Akasudurukazve, akanamata achitaura mazwi mamwecheteyo.
Gurumwandira ravanhu rakanga richinamata kunze panguva yokupisira rusenzi.
Vakati zvino vanhu vose vaombekwa, Jesu akaombekwawo. Achingunonamata denga rakazaruka,
Asi Jesu aimbobva achienda kunzvimbo isina vanhu kundonamata.
Zvakaitika kuti zvaakanga achinamata oga, vadzidzi vakanga vanaye. Akavabvunza kuti, “Ko vanhu vanonditi ndini ani?”
Mushure memazuva masere Jesu ataura izvi, akatora Pita naJohani naJemusi vakakwira mugomo kundonamata.
Paakanga achinamata, uso hwake hwakasanduka, hanzu dzake dzikachena zvokungarikira kwazvo.
Akavati kukohwa kwakawanda, asi vakohwi vashoma. Naizvozvo namatai kuna Tenzi wezvinoda kukohwiwa kuti atumire vakohwi mubasa rake rokukohwa.
Zvakaitika kuti Jesu ainamata pane imwe nzvimbo. Paakapedza kunamata, mumwe wavadzidzi vake akati kwaari, “Tenzi tidzidziseiwo kunamata sokudzidzisa kwaiita Johani vadzidzi vake.”
Iye akavati, “Kana mava kunamata, itii, “ ‘Baba zita renyu ngariyereswe umambo hwenyu ngahuuye.’
Jesu akavataurira mumwe muenzaniso wokuti vanofanira kunamata nguva dzose vasingarasi mwoyo.
“Vamwe varume vaviri vakaenda muTemberi kundonamata. Mumwe wavo aiva muFarisei, mumwe ari muteresi.
Ngwarirai nguva dzose muchinamata kuti muwane simba rokupunyuka zvose izvi zvichaitika uye kuti mukwanise kuzomira pamberi peMwanakomana womunhu.”
Paakasvika panzvimbo iyoyo akati kwavari, “Namatai kuti murege kupinda mukuedzwa.”
Iye akasudurukana navo chinhambwe chingasvike dombo kana rapotserwa. Akapfugama akanamata achiti,
Jesu achirwadziwa zvakanyanya kudaro, akatonyanya kunamata. Dikita rake rakaita samadonhwe makuru eropa achidonhera pasi.]
Paakasimuka paainamata, akauya kuvadzidzi akavawana vakakotsira nemhaka yokusuwa.
VaJudha ndokuti, “Zvakatora makore makumi mana anamatanhatu kuvaka Temberi iyi iwe ndipo paungaimise namazuva matatu here?”
Madzitateguru edu akanamata pagomo rino iri asi imi munoti: ‘MuJerusaremu ndimo munzvimbo munofanira kunamatirwa vanhu vari.’ ”
Imi munonamata chamusingazivi. Asi isu tinonamata chatinoziva nokuti ruponeso runobva kuvaJudha.
Asi nguva iri kuuya uye yatosvika ichanamatwa Baba navanamati vechokwadi vanomunamata muMweya nomuchokwadi nokuti Baba vanotsvaka vakadai kuti vavanamate.
Pakati pevanhu vakaenda kundonamata kuzuva guru paiva navamwe vaGiriki.
Vose ivava vakazvipira pakunamata pamwechete namadzimai naMaria amai vaJesu navakoma navanun'una vake.
Vakanamata vachiti, “Tenzi, muzivi wemwoyo yavanhu vose, tiratidzei pavaviri ava kuti ndiani wamunosarudza
Izvozvo muJerusaremu makanga muina vaJudha, vanhu vakanga vakazvipira pakunamata, vakanga vauya kuzombogaramo vaibva kumarudzi ose avanhu enyika dzose dziri pasi pedenga.
Rimwe zuva Pita naJohani vaienda kuTemberi panguva dzokunamata paawa yechitatu masikati.
Asi isu tozvipira kubasa rokunamata nokuva vashandiri veShoko.”
Vakavaunza panavapositori. Ivo vakanamata vakaisa maoko avo pavari.
Pamazuva iwayo vakaumba mhuru vakapira chibayiro kuchiumbwa chokunamata vachipemberera zvakaitwa namaoko avo.
Pavaimutaka namatombo Sitefani akanamata achiti, “Tenzi Jesu gamuchirai mweya wangu.”
Akasimuka akaenda. Hoyo muEtiopia muyuniki aiva gurukota raKandasi mambokadzi wavaEtiopia aiva mukuru mukuru wezvoupfumi hwake hwose, akanga auya kuJerusaremu kuzonamata.
Tenzi akati kwaari, “Simuka uende kumugwagwa unonzi Sitireti ubvunze pamba paJudhasi mumwe murume wokuTasusi anonzi Sauro. Izvozvi ari kutonamata
Pita akavaburitsa kunze vose akapfugama achinamata. Akatendeukira kuchitunha akati, “Tabhita muka.” Tabhita akabva asvinura. Paakaona Pita, akamuka akaita zvokugara.
Mutumwa uya akataura kwaari paakaenda, akadaidza varanda vake vaviri nomusoja aida zvokunamata pakati pavanhu vaimushandira.
Ramangwana acho pavakanga vari parwendo rwavo vava kusvika pedyo neguta, Pita akakwira pamusoro pemba kundonamata masikati makuru. Akanzwa nzara akada zvokudya.
Koneriasi akati, “Mazuva mana apfuura panguva yakaita saiyo ino ndakanga ndichinamata paawa yechitatu masikati mumba mangu. Ndiye onei munhu amira pamberi pangu akapfeka zvinhu zvichena!
“Ndaiva muguta reJopa ndichinamata; ndiri mumweya ndakaona, chiratidzo chechimwe chinhu chaiburuka chaiita sejira guru richidzikiswa richibva kudenga richiita serakabatwa namakona aro mana. Rakaburuka richiuya kwandiri.
Paakaziva izvi, akaenda kumba kwaMaria amai vaJohani aiva nerimwe zita rainzi Mako kwakanga kwaunganwa navanhu vazhinji vachinamata.
Asi ngativanyorerei kuti varege kusvibiswa nezvifananidzo zvokunamata; varege upombwe nenyama isina kusinzwa nomusiya.
zvokuti: imi musiyane nezvinhu zvakabairwa zvifananidzo zvokunamata, murege musiya nenyama isina kusinzwa uye upombwe. Kana mukarega izvi munoita zvakanaka. Musare zvakanaka.”
Pauro paaivamirira kuAteni, akadzongodzwa mwoyo paakaona guta iroro rizere nezvifananidzo zvokunamata.
Paakapedza kutaura izvi akapfugama akanamata navo vose.
Pakapera mazuva edu ikoko, takasimuka tikaenda murwendo rwedu. Vakatiperekedza vose namadzimai avo navana kusvikira kunze kweguta. Takapfugama pamahombekombe egungwa tikanamata ndokuonekana.
Asi kune vechirudzi, vakadavira, takavatumira tsamba ine zvatakatema zvokuti vasiyane nezvinhu zvakabairwa zvifananidzo zvokunamata, varege musiya nenyama isina kusinzwa noupombwe.”
“Pandakadzokera kuJerusaremu, pandainamata muTemberi
Sezvinhu zvamungatotsvakawo, hakusati kwapera mazuva anopfuura gumi namaviri kubvira pandakaenda kundonamata kuJerusaremu.
Mambo, zviri kutarisirwa kuwanika namadzinza edu gumi namaviri pavanonamata nemwoyo wose siku nesikati, chitarisiro ichocho ndicho chandiri kupirwa mhosva navaJudha.
Zvakaitika kuti baba vaPubhiriosi vakanga varere vachirwara, vachipisa muviri uye namanyoka okuburitsa ropa. Pauro akavashanyira akanamata achiisa maoko ake pavari akavaporesa.
Munhu wose anoita zvakaipa achapinda munhamo namatambudziko, kutanga nomuJudha tevere muGiriki.
Farai muchitarisiro chenyu, tirirai mumatambudziko enyu. Rambai muchingonamata.
Regai kunyimana, kunze kokunge mabvumirana kuregera kwechinguva, kuti mumbonamata, asi mozodzokerana zvakare nokuti Satani angadaro akakuedzai nokutadza kuzvibata.
1 VaKorinte 11:4
Saka murume anonamata kana kuporofita akafukidza musoro anozvishoresa musoro wake.
1 VaKorinte 11:5
Asi mukadzi wose anonamata kana kuporofita asina kufukidza musoro anozvishoresa musoro wake. Zvakangofanana nokunge akaveurwa musoro wose.
Zvino, ndinofara namatambudziko angu andinotambudzikira imi. Mumuviri wangu ndinozadzisa zvakasara pakutambudzika kwaKristu achitambudzikira muviri wake, sangano.
Musabvumire munhu kuti akutii hamukodzeri pamusana pokuvavaridza panyaya dzokuzvirwadzisa kana kunamata vatumwa achiti anoona zviratidzo achinyunduma zvisina musoro nepfungwa dzamanyawi chete asingasimbi
Izvi zvinotarisika soungwaru mukuzviomesera kwavanoita pakunamata kwavo vachizvininipisa uye kuzvirwadzisa kwavanoita muviri asi zvisina chazvinobatsira pakudzora munhu pahavi dzomuviri wake.
Naizvozvo urayai zvenyika zviri mamuri izvi zvinoti: ufeve, zvisina kuchena, havi dzakaipa, nokudokwairira uipi nokukarira upfumi zvinongova zvimwechetezvo nokunamata zvifananidzo.
Rambai muchinamata, mungwarire kunamata muchitenda.
Nechikonzero ichochi, hama dzangu, munhamo namatambudziko edu, takanyaradzwa nechitendero chenyu.
Namatai nguva dzose
nemhondi dzinouraya amai navanouraya vanhu navanoita upombwe uyewo ngochani namatasvuramwoyo navarevi venhema navanopika zvenhema navanoita zvinopesana nechidzidziso chechokwadi
Ndini Pauro; muranda waMwari nomupositori waJesu Kristu kuti ndiendese mberi chitendero chavasarudzwi vaMwari uye kuti ndiendese mberi kuziva kwavo chokwadi chinowirirana nokunamata Mwari.
Zvaikodzera kuti muridzi wezvinhu zvose, iye nyakuita kuti zvivepo, zvaaida kuendesa vana vazhinji mumbiri, aite kuti namatambudziko, mutungamiriri wavo ave wakaruramisisa.
Kunyange chitenderano chokutanga chaivewo nemirau yezvokunamata uye Nzvimbo Tsvene pasi pano.
Pamusana pechitendero, Jakobho paakanga ava kufa akakomborera vana vaJosefi vose vari vaviri akakotamira pamusoro petsvimbo yake achinamata.
Naizvozvo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu zvakawanda kudai, ngatichikandai pasi mitoro yose nezvitadzo zvinoramba zvakati nesu namata, timhanye nhangemutange yatakatarirwa
Eriya akanga ari munhu akangoitawo sesu pamuzvarirwo wake. Akanamata nomwoyo wose kuti kurege kunaya. Kwamakorewo matatu nemwedzi mitanhatu hakuna kunaya panyika.
Akazonamatazve, denga rikanaya mvura, nyika ikabereka muchero wayo.
Kuguma kwezvinhu zvose, kwava pedyo, naizvozvo dzikamai muzvibate kuti mukwanise kunamata.
vakuru vakuru makumi maviri ana vana vaya vaiti pasi wareware pamberi paiye akanga agere pachigaro choumambo vachimunamata iye anoramba aripo narini narini. Vaiwarika zviremba zvavo pamberi pechigaro choumambo vachiimba vachiti,
Zvisikwa zvipenyu zvina zviya zvakati, “Ameni,” vakuru vakuru vaya vakabva vati wareware pasi vachinamata.
Vatumwa vose vakanga vamire vakatenderedza chigaro choumambo vakatenderedzawo vakuru vakuru vaya vakatenderedzawo zvisikwa zvipenyu zvina zviya. Vatumwa vakati kotakota nouso pamberi pechigaro choumambo vachinamata Mwari
Ndakapiwa karutanda kokueresa kanenge mudonzvo ndikanzi, “Simuka uyere Temberi yaMwari neatari uverengewo vanonamatamo.
Vakuru vakuru makumi maviri ana vana vaya vagere pazvigaro zvavo zvoumambo vakati kota kota nouso pamberi paMwari vachinamata Mwari
Vanhu vakagwadama vachinamata zigaranyanya riya nokuti rakanga rapa simba raro kuchikara uye vakagwadama vachinamata chikara chiya vachiti, “Ndiani angaenzaniswe nechikara uye ndiani angarwisane nacho?”
Vose vanogara panyika vachachigwadamira vachichinamata, vose zvavo vana mazita asina kunyorwa pasi pasati pavapo, mubhuku roupenyu reHwayana yakauraiwa.
Ichi chaiva namasimba ose echikara chokutanga chichiita kuti pasi navagari vapo vagwadamire vachinamata chikara chokutanga chakanga chiine ronda rakaipisisa rakanga rapora.
Mumwezve mutumwa wechitatu akavatevera achiti nezwi guru, “Kana munhu akanamata chikara nechifananidzo chacho achiiswa mucherechedzo pahuma yake kana paruoko rwake,
Utsi hokurwadziwa kwavo hucharamba huchingotogoka kudenga nokusingaperi uye havana zororo siku nesikati, ivava vanonamata chikara nomufananidzo wacho navavo vanogamuchira mucherechedzo nezita racho.”
Saizvozvo mutumwa wokutanga akaenda akadururira ndiro yake panyika. Vanhu vaya vakanga vaine mucherechedzo wechikara vakagwadama vachinamata chifananidzo chacho, vakaita maronda anonyeka akaipisisa.
Vakuru vakuru makumi maviri ana vana vaya nezvisikwa zvipenyu zvina zviya zvakati pasi kota kota zvichinamata Mwari agere pachigaro choumambo zvichiti, “Ameni. Areruya!”
Hapachazovapo nokurengererwa rushambwa asi chigaro chaMwari choumambo necheHwayana zvichava muguta iroro; varanda vake vachamugwadamira vachimunamata.
Asi iye akanditi, “Usadaro, ini ndiri mushandipamwe newe uye pamwe navaporofita, hama dzako navanochengeta mazwi ebhuku rino iri. Mwari ndiye waunofanira kugwadamira uchinamata.”